Njikwa ohere: Jikwaa njikwa data nke ọma, ọbụlagodi na AutoCAD - Geofumadas
Nọvemba, 2014 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
M na bupụrụ oge iji chọpụta nke a na-akpali ngwa, nke m n'aka ga-mmasị ọtụtụ ndị ọrụ nke CAD technology, ịchọ-arụ ọrụ na GIS data, dị ka ikpe file shp, kml, gpx, jikọọ ọdụ data ma ọ bụ ọrụ WFS .
Ọ bụ ihe Onye isi ochichi, mmepe nke na-abia na uzo abuo: Otu maka desktọọpụ, nke nwere ọrụ CAD-GIS nke ya, na ọzọ dị ka ngwa mgbakwunye maka AutoCAD, nke dị maka nsụgharị sitere na AutoCAD 2008 na AutoCAD 2015.
Anyị maara na taa enwere ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa, ma ihe mepere emepe na nke nwe ya, yabụ ịme ihe ngwọta ọhụụ chọrọ iji nlezianya rụọ ọrụ na oghere ndị nnukwu ndị nrụpụta ngwanrọ na-ahapụ na usoro ndị ọrụ nke ndị ọrụ. Mgbe nbudata ngwa ọrụ na ule dị iche iche na data isi mmalite, m kwere na ya ike na-aza ajụjụ ndị ọkachamara na ubi nke geoengineering dị ka:
Ọ nwere ike ijikọ AutoCAD na PostGIS?
Kedu ka m ga-esi gbanwee faịlụ KML site na CAD?
Enwere ike ịkpọ ọrụ WFS site na AutoCAD?
Kedu esi ewepụta data site na Open Street Map ka ESRI Shape faịlụ?
1. Njikwa Spatia maka desktọọpụ.
Ngwaọrụ desktọọpụ na-eme usoro maka ikiri, nyocha, dezie, mbipụta na mbupụ data gbasara ohere. Nke a anaghị achọ AutoCAD, ebe ọ na-agba ọsọ n'adabereghị na Windows.
Ụdị spatial akwadoro
Ọ bụ ezie na Spatial Manager maka na Desktọpụ dị mfe, ya GIS / CAD data njikwa ike karịrị ihe m na-atụ anya na mbụ:
Na-aguta data sitere na isi mmalite 20, dịka e gosiri na tebụl n'aka nri.
Ị nwere ike dezie ve na tabular data sitere na SHP, KML / KMZ faịlụ na Google Earth.
Nwere ike ịgụ ma dezie faịlụ ederede dị ka ederede ASCII, nke a bụ ikpe na ndepụta ahazi na usoro CSV.
Site na OGR ị nwere ike idezi data DGN na Microstation V7, yana DXF, TAB / MIF na Mapinfo. Dika E00 guru na ArcInfo, GeoJSON na WFS.
Banyere data ọdụ data, ị nwere ike dezie PostGIS, SQLite, na SQL Server ozugbo.
Ị nwere ike ịgụ site na ODBC (ọ bụghị dezie) isi nchekwa data.
Site na FDO ị nwere ike idezi data sitere na AutoDesk SDF, gụọ ọrụ Web Feature Services (WFS) na MySQL.
Ị nwekwara ike ịgụ data ọkọlọtọ GPS (GPX)
Mgbanwe nke ndị nchịkọta
Kpọ isi mmalite, naanị ị ga-ahọrọ usoro ahụ, na ọkachamara ahụ na-eduga na mkpebi dịka aha nke oyi akwa ebe, data ga-abịa dị ka ajụjụ, agba, nghọta na ọ bụrụ na a ga-echekwa polygons ma ọ bụ data arch-node. N'ime oge ị ga-ahụ atụmatụ ndị bara uru, dị ka ọrụ mmemme na ịdọrọ / dobe na Windows Explorer.
Enwekwara ike igosi usoro ntughari na usoro ntinye nke nkpuchi mbu nwere, ma juo ka o gbanwee ka o buru nke ozo; ọ bara uru ma ọ bụrụ na anyị nwere data sitere na isi mmalite dị iche iche yana na anyị nwere olile anya iji anya nke uche hụ otu amụma ahụ. Ọ na-akwado ọtụtụ sistemụ nrụtụ aka, enwere ike ịdepụta ma hazie aha, mpaghara (mpaghara / mba), site na koodu, site na ụdị (atumatu / ala).
Ọrụ CAD - GIS
Ọ bụ n'ezie a ngwá ọrụ dị ike, n'ihi na ozugbo data egosipụta ga-agbanwe nnọọ mfe egosipụta Njirimara, nke kewara n'ígwé àgwà, mgbanwe iji na ndị kasị mma: na-akpọ ndabere oyiyi ma ọ bụ Bing Maps, MapQuest, ma ọ bụ ndị ọzọ.
A naghị ahụ ụfọdụ ọrụ ahụ, belụsọ na achọrọ ha, ebe ọ bụ na ha bụ gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, hụ na ịhọrọ ndekọ na-eme ka nhọrọ nhọrọ rụọ ọrụ, dị ka ihichapụ, mbugharị na data ahụ, ntụgharị ntụgharị, ma ọ bụ ịmepụta oyi akwa na nsonaazụ ahọrọ.
E nwere ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ, nke m na-akọwaghị n'ụzọ zuru ezu na nke a n'isiokwu, dịka mbipụta nke map ma ọ bụ àgwà ndị a họọrọ, nke bụ nnọọ ihe omimi.
Mbupụ na usoro ndị ọzọ
Vector data ozugbo mata na panel data isi mmalite nwere ike exported ndị na-esonụ 16 formats: SHP, KML, KMZ, ASC, CSV, NEZ, TXT, XYZ, UPT, DB, SQLite, SDF, DGN, DXF , taabụ ma MIF.
Ịhụ na nke a ga-eme ka mbupụ eme ọtụtụ ndị na-eji, ma ugbu a adịghị ọ bụla ngwa, dị ka na-emeghe data si Open Street Maps (OSM) na mbupụ na DXF ma ọ bụ SHP.
Na-edebe usoro dịka ọrụ
Njikwa Spatial abụghị ngwá ọrụ GIS zuru ezu, dịka ihe ngwọta ndị ọzọ dị, kama ọ bụ ihe mgbakwunye maka njikwa data. Agbanyeghị, ọ nwere ọrụ nke onye ọrụ GIS ọ bụla ga-atụ anya iji n'ihi uru ọ bara. Otu ihe atụ bụ ọrụ akpọrọ Task, nke ị nwere ike ichekwa ihe ị na-eme iji kpọọ ya n'oge ọzọ, dịka ọmụmaatụ:
Achọrọ m ịchekwa oyi akwa data a na-akpọ parks.shp, dị ka usoro KML, na oyi akwa ahụ na mbụ na CRS NAD 27 / California Zone I, na enwere m olileanya na a ga-agbanwe ya na WGS84 nke bụ nke Google Earth na-eji. Ọzọkwa, na ọ na-eji data AHA dị ka aha na PROPERTY dị ka nkọwa, acha anụnụ anụnụ jupụta agba na odo oke, 1 pikselụ n'obosara na 70% nghọta. Na elu na-achụ nta n'elu ma na a kpọmkwem Dropbox nchekwa.
Mgbe m na-agba ya na nke mbụ, ọ na-ajụ m ma m chọrọ ịchekwa ya dịka Task, iji na-agba ya oge ọ bụla, ọbụlagodi na windo sistemụ Operating.
Ọ bụrụ na m chekwaa ya dịka Task, mgbe ị na - ele ya anya, ị ga - enwe ihe ndekọ ndị na - esonụ:
Pịa 'Mezue' iji mepụta nhọrọ ndị a:
Isi iyi data:
- Faịlị: Mpempe ụzọ: \_ data nlele \_ SHP \_ Parks.shp
Ebe ntinye data:
- Faịlị: C: \_ Ndị ọrụ \_ galvarez.PATH-II \_ Downloads \_ Parks.kml
- A ga-edegharị tebụl lekwasịrị anya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
- Ọ ga - agbanwe usoro nhazi nke isi mmalite ya na usoro ndị a:
- Isi mmalite CRS: NAD27 / California mpaghara I
- Ọrụ: NAD27 ka WGS 84 (6)
Ịchekwa ụzọ na Project
Nwere ike kọwaa ụzọ mkpirisi ụzọ, nke a maara dị ka czọ mkpirisi, dị ka ArcCatalog na-eme, site na ịchọpụta isi data data ga-ajụkarị. Enwere ike ịchekwa faịlụ ahụ na ndọtị .SPM, nke na-echekwa nhazi niile dịka ọrụ QGIS ma ọ bụ ArcMap MXD ga-eme.
Licenses na Ahịa nke Spatial Manager na Desktọpụ
Ị nwere ike download nsụgharị ikpe nke Ohere Spatial. Enwere mbipụta atọ nke ngwa ọrụ a: Basic, Standard and Professional, nwere arụmọrụ nwere ike ịtọ, dị ka egosiri na tebụl na-esonụ:
Njirimara General Basic Standard Professional
Ejiri ya na nkewa
Dụ na dobe data gbasara ohere na map
Atụmatụ ndị dị na mbara igwe (n'okporo ámá, ihe oyiyi, ngwakọ)
Ihe ngosi ihu igwe nwere ọgụgụ isi
Họrọ na nyo dabere na àgwà
Ozi mbupụ maka iji ọrụ ma ọ bụ ngwa CAD
Mbido ma ọ bụ àgwà
Ajụjụ Data Data
Mee ọkwa ọhụrụ site na nhọrọ ma ọ bụ ajụjụ
Ịtọ ala n'elu ala
Nkewa nke akwa n'ukwu
Mpụga n'èzí na nke dị n'ime
Kwupu akwa site na isi mmalite data
Detuo njirimara n'adpuru
Ido ụzọ mkpirisi
Ịnweta faịlụ gbasara ohere (SHP, GPX, KML, OSM, wdg.)
Njikwa nke isi mmalite data
Inweta ohere nchekwa data nchekwa data (SQL Server, PostGIS, wdg.)
Inweta njikọ ndị ọzọ (WFS, ODBC, wdg)
Chọta ma dochie Data
Dezie data alphanumeric
Ejikwa otutu ederede
Wepụ àgwà ndị achọghị
Chekwaa ka e mebiri n'ígwé dị iche iche
Ọrụ na usoro
Nbubata na mbupu
Mwepụta nke usoro site na ọrụ
Gbaa ọrụ site na windo sistemụ
Ikike Ahịa nke Onye
2. Njikwa Spatial maka AutoCAD.
Ihe mgbakwunye a dị mma maka ịkwado ikike gbasara ohere nke nsụgharị nke AutoCAD, ma na-arụ ọrụ na Civil3D, Map3D na Nhazi.
N'okwu a, anwalewo m ya site na iji AutoCAD 2015, ma ozugbo ịwụnye taabụ na-egosi na Ribbon na ụfọdụ arụmọrụ. N'ezie, ọ bụghị ụdị Desktọpụ niile na-abịa, n'ihi na AutoCAD nwere iwu nke ya maka nke a.
Ọ bụrụ na ịmepụta data, naanị pịa nri "Isi mmalite data ndị ọrụ"Ma họrọ"Ebe nchekwa data ọhụrụ”. Mgbe ahụ a na-ahọrọ ụdị font, nke bụ otu nhọrọ dị ka nsụgharị desktọọpụ.
Anyị maara na ụfọdụ n'ime nke a nwere ike ime site na AutoCAD Map na Civil 3D site na OGR, agbanyeghị mgbe anyị tụlere ihe niile gbasara ohere gbasara Spatial, anyị na-achọpụta na ndị okike nke ngwa a echewo na nraranye maka ọrụ niile nke ndị ọrụ AutoCAD ha enweghị ike ime n'ụzọ dị irè. Akụkụ dị ka ịkpọ oyi akwa PostGIS, iji nye ihe atụ, ma ọ bụ ọrụ WFS bipụtara site na oyi akwa GeoServer nke na-egosi Oracle Spatial data store.
Iji hụ ọrụ nke Spatial Manager na AutoCAD, anyị mere vidiyo a na ihe atụ nke mmasị anyị.
Na vidiyo a na-akpọ ya na mpaghara shp mpaghara, yana oke obodo, mgbe ahụ otu nwere mpaghara obodo. N'ikpeazụ, a na-eme njikọ maka ọrụ WFS na n'ikpeazụ a nke microstation DGN faịlụ plot na ụdị arc-node.
Can nwere ike igosi na isi ihe ndị a na-abịa dị ka mgbochi AutoCAD, ọbụlagodi na a na-eji ngọngọ dị iche iche dabere na njirimara nke data. Tọọkwa ma ọ bụrụ na ha ga-abịa dị ka polylines, polylines 2D ma ọ bụ 3D polylines.
Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị na-egosi na ị na-ebubata àgwà ndị ahụ dị ka data XML agbakwunyere, ha ga-abịa dị ka ihe akpọrọ Extended Entity Data (EED). N'akụkụ a ọ dịka ihe Bentley Map na-eme, na-ebubata data agbakwunyere n'ime DGN dị ka data XFM nwere ike ịgbatị.
Njikwa Njikwa Spat maka AutoCAD
E nwere nsụgharị License abụọ, na nke a, a na-akpọ Basic Edition na nke abụọ Edition Edition, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, dị ka ndepụta nke ọrụ ndị a:
Mbubata data spatial abanye na drawings AutoCAD
Mgbanwe nke nhazi na mbubata
Oghere nyocha nke data (EED / XDATA). Ọrụ a bụ naanị na mbipụta Standard.
A na-ebute ihe ọ bụla na ntaneti ọhụrụ ma ọ bụ dị
Ihe nwere ike ịbịakwute nyocha akpọrọgwụ dabere na uru data
Ojiji nke nkanka ma obu centroids
Ntinye nke ngọngọ dabere na data tabular
Ngosipụta na nghọta nke polygons
Poly centroids ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Ugo na oke si na data tabular
Nbunye data site na tebụl dịka EED. Ọrụ a bụ naanị na mbipụta Standard.
Ịnweta data gbasara ohere (SHP, GPX, KML, OSM, wdg.)
Njikwa nke isi mmalite data. Ọrụ a bụ naanị na mbipụta Standard.
Ịnweta ohere data gbasara ohere. Ọrụ a bụ naanị na mbipụta Standard.
Inweta njikọ ndị ọzọ (WFS, ODBC, wdg). Ọrụ a bụ naanị na mbipụta Standard.
Ọnụahịa nke Onyeọrụ Spatial maka AutoCAD
The Basic Edition nwere ọnụahịa US $ 99 na Standard Edition US $ 179
Ngwaọrụ abụọ a bụ ihe ngwọta na-atọ ụtọ. Achọpụtara m Spatial Manager maka Desktọpụ bara ezigbo uru, ebe ọ bụ na mgbanwe data, edezi, mbupụ na ọrụ nyocha na-ebi ndụ na aha ya. Agbanyeghị, dịka m kwuru, ọ bụ ihe nkwado na nke etiti n'etiti usoro a na-eme na CAD yana nrigbu ozi nke emere site na ngwanrọ GIS.
Nke abuo yiri m ka m na-etowanye ntakịrị ka m na-enweta ihe nzaghachi site na ndị ọrụ; n'ihi na ugbu a, mezue ihe AutoCAD apụghị ime.
N'ịtụle ọnụahịa ndị ahụ, ọ dịghị njọ na ego ahụ, ọ bụrụ na anyị echebara uru nke nwere ike iweta.
Maka ndepụta nke ọnụahịa, lee ibe a. http://www.spatialmanager.com/prices/
Ịmatakwu banyere atụmatụ na akụkọ, nke a bụ Blog Manager Blog ma ọ bụ na Wiki
Previous Post«Previous Chọọ na-eji dochie iji mgbe okwu: Microstation
Next Post Ọ bụghị otu ihe ahụ. Differentiating n'etiti ochie map na akụkọ ihe mere eme mapNext »